PVC နှင့် WPC အပေါ်ယံလွှာမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - တရုတ် Qingdao Xinquan ပလတ်စတစ်
PVC ၏ 1. အင်္ဂါရပ်များနှင့်အားသာချက်များ, WPC အပေါ်ယံလွှာမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့:
PVC နှင့် PVC သစ်သားစုပေါငျးအပေါ်ယံလွှာ foamed ဘုတ်အဖွဲ့ (အဆောက်အဦဘုတ်အဖွဲ့, WPC ပန်းကန်) extrusion လိုင်းစျေးကွက်လိုအပ်ချက်အတိုင်းငါတို့ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပစ္စည်းပြန်သုံး, ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ WPC ဘုတ်အဖွဲ့ PVC, စွန့်ပစ်သစ်သားသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးအပင်များ, CaCo3 နှင့်အဓိကပစ္စည်းကဲ့သို့သောအခြားသည်ကိုအသုံးပြုသည်, ထိုပျဉ်ပြားသံမဏိပန်းကန်နှင့်ဝါးပန်းကန်ရာယူနိုင်သည်ကိုအသစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါထုတ်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, ချေး-ခုခံ, damp-သက်သေပြ, ပိုးရွ-သက်သေပြ, ပုံပျက်ခုခံ features, သူတို့သည်ထိုကြောင့်, သစ်သားပစ္စည်းများ, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, အလင်းအလေးချိန်ကဲ့သို့တူညီသောအပြောင်းအလဲနဲ့အခြေအနေများအောက်တွင်လုပ်ငန်းများ၌ခံရနိုင်ပြီး, 30 ကျော်ကြိမ်ပြန်သုံးနိုင် အနာဂတျမှာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်လူကြိုက်များလျှောက်လွှာများ .. အဆိုပါစွန့်ပစ်တောအုပ်နှင့်ပလပ်စတစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထားတဲ့မသာကောင်းသော, WPC ပျဉ်ပြားထုတ်လုပ်ရန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း "ဥစ္စာဓနသို့လျော့ဖွင့်" ။
2. PVC နှင့် WPC အပေါ်ယံလွှာပျဉ်ပြားလျှောက်လွှာ foamed:
PVC နှင့် WPC အပေါ်ယံလွှာရာသီဥတုခုခံအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်များရှိပျဉ်ပြားလည်းစသည်တို့ကိုအဆောက်အဦဘုတ်အဖွဲ့, tools တွေကိုဘုတ်အဖွဲ့, ပရိဘောဂ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ထုပ်ပိုး, ပြန်လည် box ကိုကြော်ငြာပန်းကန်, ပြပွဲပန်းကန်, စီးပွားရေးပန်းကန်, အိမ်ခေါင်မိုး, သင်္ဘောပရိုဖိုင်အတွက်မှိုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်ဒီထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုဖို့ foamed , ခုခံပိုး, corrode, မိုးအုံ့, ပုရွက်ဆိတ်, မီး, ရွေးချယ်သောပိုးကောင်များ, ကြွက်, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, စတာတွေလည်းရှည်လျားကြိမ်ကိုသုံးအပူချိန်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး။
ဒါကထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အထူးဒီဇိုင်း SJZ80 conical အမွှာဝက်အူ extruder ချမှတ် DC ကမြန်နှုန်းထိန်းညှိကိုအသုံးပြုသည်ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်အပူချိန် controller ကိုတင်သွင်း, ကြီးမားတဲ့မြန်နှုန်းစညျးမဉျြးဥပနယ်ပယ်, တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု, လွယ်ကူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ အဆိုပါအရန်ယူနစ်ဒါဟာကောင်းသောအမြှုပ်ရလဒ်သေချာစေရန်ကြီးမားသောအတင်းအကျပ်အအေးကိရိယာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်စသည်တို့ကို, စက်နှင့်ပုံးဖြတ်တောက်, ကိုဆွဲယူ-ချွတ်, လေဟာနယ် foamed ရပ်တည်ချက်ထားရှိရေး။ အဆိုပါခူအမျိုးအစားတစီးကို-ချွတ်, précisedလျှော့ချရေးနှင့်ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာချမှတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ features; ကြီးမားသောတစီးကိုအင်အားနှင့်တည်ငြိမ်တစီးကိုချွတ်။ အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းစက်က The ပုံးရွှေ့ပြောင်းပုံဖမ်းတွန်းလှည်းနှင့်အထူးဒီဇိုင်းရော်ဘာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကွယ်အကာနှင့်အတူလိုက်ဖက်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တိကျသောအလုပ်လုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, တိကျမှုဖြတ်တောက်ခြင်း, စတာတွေရှိပါတယ်စသည်တို့ကိုထုတ်ကုန်အခမဲ့ပျက်စီးမှုလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေး၏အားသာချက်များကိုအရန်ထားသည် ယူနစ်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောသော PLC ထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုနိုင်ကြသည်။
ပုံစံ SJSZ80 / 156 SJSZ92 / 188 SJSZ80 / 156, SJ65 / 132 SJP92 / 32
ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ width မီလီမီတာ 1220 1600 1600-2050 2050
ကုန်ပစ္စည်းအထူမီလီမီတာ 3-20 5-30 3-20 3-20
မက်စ်။ extrusion စွမ်းရည်ကီလို / h 350 500 600 450
extruder KW ၏ပါဝါကို 75 110 120 75
ယခင်: PVC Artificial စကျင်ကျောက် / အတုယူသောကျောက်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: PC ကို Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့ / စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
foam ဘုတ်အဖွဲ့ Crusting
pc Grid ပြားထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
pc Grid ပြားထုတ်လုပ်မှုစက်
pc Hollow ပြားထုတ်လုပ်မှုစက်
ပလတ်စတစ် Hollow ပြား
စက်ပြုလုပ်ခြင်းစစ Grid ပြား
PP Grid ပြားထုတ်လုပ်ခြင်းစက်
စက်ပြုလုပ်ခြင်း PP Hollow ပြား
စစ Hollow ပြားထုတ်လုပ်မှုစက်
PVC ဘုတ်အဖွဲ့ Extrusion လိုင်း
PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့စက် Making
PVC စကတ်ဘုတ်အဖွဲ့ Extrusion
Wpc ဘုတ်အဖွဲ့စက် Making
Wpc ကုန်းပတ်ဘုတ်အဖွဲ့စက် Making
Wpc Foamed ပြားထုတ်လုပ်ခြင်းစက်
Wpc PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့စက်
PVC Artificial စကျင်ကျောက် / အတုယူသောကျောက်ဘုတ်အဖွဲ့ Pro ကို ...
PP, PE ထူထပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC နှင့် PVC WPC အခမဲ့မြှုပ်အလှဆင်ဘုတ်အဖွဲ့ PR ...
PVC Wavy ဘုတ်အဖွဲ့ & Trapezoidal ဘုတ်အဖွဲ့ကုန်ပစ္စည်း ...